I-Aeromexico ithola imvume yenkantolo ekuthengisweni kwemikhumbi yezindiza
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-Aeromexico ithola imvume yenkantolo ekuthengisweni kwemikhumbi yezindiza
Airlines • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Investments • IMexico Breaking News • Izindaba • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
I-Aeromexico yokwandisa izimoto zayo njengengxenye yezivumelwano zayo ezihlelwe kabusha
I-Aeromexico ukwengeza izindiza ezintsha ezingamashumi amabili nane zeBoeing 737 MAX ezindizeni zayo
I-Aeromexico ukwengeza izindiza ezine ezingama-787-9 ze-Dreamliner ezimotweni zayo
INkantolo Yokuqothuka yase-United States Yesifunda SaseNingizimu saseNew York ivume ukungena kwe-Aeromexico kokuthengiselana
IGrupo Aeroméxico, iSAB de CV imemezela ukuthi kulandela imininingwane edalulwe ngo-Ephreli 23, 2021, maqondana nesivumelwano sase-Aeromexico sokunyusa imikhumbi yaso ngemisha engamashumi amabili nane (24) Boeing Izindiza ezingama-737 MAX, kufaka phakathi i-B737-8 ne-B737-9 MAX nezindiza ezine (4) 787-9 ze-Dreamliner njengengxenye yezivumelwano zayo ezihlelwe kabusha nomkhiqizi nabathile abancane futhi AeromexicoIzivumelwano ezihlobene nabanye abahlinzeki kanye nezinhlangano zezezimali futhi ngokubambisana, iNkampani yazisa ukuthi i-United States Bankruptcy Court yeSifunda esiseNingizimu seNew York, eyengamele inqubo yokuhlelwa kabusha kwezezimali yaseAeromexico Isahluko 11, ikuvumile ukungena kwe-Aeromexico kokuthengiselana.
I-Aeromexico izoqhubeka nokulandela, ngendlela ehlelekile, ukuhlela kabusha kwayo ngokuzithandela kwezezimali ngokusebenzisa iSahluko 11, ngenkathi iqhubeka nokusebenza futhi inikezela ngezinsizakalo kumakhasimende ayo futhi inikezela inkontileka kubathengi bayo izimpahla nezinsizakalo ezidingekayo ekusebenzeni. Inkampani izoqhubeka nokuqinisa isimo sayo sezezimali kanye nokuthengiswa kwemali, ukuvikela nokugcina ukusebenza kwayo kanye nempahla yayo, futhi isebenzise ukulungiswa okudingekayo ukubhekana nomthelela ovela ku-COVID-19.
IGrupo Aeroméxico, iSAB de CV iyinkampani ephethe izinkampani ezingaphansi kwayo ezisebenza kwezokuhweba ngezindiza eMexico kanye nokukhuthaza izinhlelo zokwethembeka kwabagibeli. I-Aeromexico, inkampani yezindiza yomhlaba wonke yaseMexico, inesikhungo sayo esikhulu sokusebenza eTheminali 2 Yesikhumulo Sezindiza SaseMexico City. Inethiwekhi yayo eya kuyo ifinyelele eMexico, e-United States, eCanada, eMelika Ephakathi, eNingizimu Melika, e-Asia naseYurophu. Izimoto ezisebenza manje zeQembu zifaka phakathi izindiza iBoeing 787 ne737, kanye nesizukulwane sakamuva i-Embraer 190. I-Aeromexico inguzakwabo owasungula iSkyTeam, umfelandawonye ogubha iminyaka engama-20 futhi onikeza ukuxhumana emazweni angaphezu kwe-170, ngokusebenzisa izindiza zabalingani abayi-19. I-Aeromexico idale futhi yasungula uHlelo Lokuphathwa Kwezempilo Nenhlanzeko (SGSH) ukuvikela amaklayenti ayo nabahlanganyeli kuzo zonke izigaba zokusebenza kwayo.